War - Q mashiinka saarista Tattoo-ka ee leysku beddelo
Dad badan ayaa u sameeya tattoos ujeeddo moodal ah, laakiin waxay rabaan inay ka saaraan waxoogaa kadib. Goobaha qurxinta, qurxinta tattoo waxay noqotay suuq cusub. Q ma iska beddeli karaa mashiinnada leysarka ee guryaha qurxinta lagu qurxiyo?
Awoodda leysarka waxay noqon kartaa 250W, 500W, ama xitaa ka badan.
Mashiinka masaxa tattoo waa inuu isticmaalaa dalool weyn. Waxay leedahay qaabeyn sare, wax soo saar xoogan, shaqo joogto ah iyo adeeg dheer. Awoodda korantadu waxay u qaybsan tahay gubasho hore iyo gubasho la'aan. Soosaarka korontada aan horay u gubin waa mid hooseeya, taas oo saameyn ku yeelata nolosha qalabka godka oo aan xasillooneyn, una nugul dhibaatooyinka. Guud ahaan, mashiinka saarista tattoo wanaagsan waa in lagu qalabeeyaa koronto horay loo gubay iyo dalool weyn oo laser ah.
Markaad ka saareyso sunnayaasha, waa inay ahaato sida ugu yar ee suurtogalka ah, maxaa yeelay kani ma aha mid hal mar la maydho, oo inta u dhexeysa maydhashada labaadna way dheer tahay, maxaa yeelay maqaarku wuxuu u baahan yahay geeddi-socod dheef-shiid kiimikaad dheer, markaa waa inaad marka hore sameysaa ka hor siinta macaamiisha. Si loo cadeeyo, maahan inay isla markiiba lawaayay kadib markay maydheen.
Taxaddarrada ka-goynta Tattoo laser-ka:
1. Maqaarku waa inuu ahaadaa mid qallalan 3 maalmood gudahood ka dib markii laga saaray leysku laser, biyo ma leh, ma qurxiyo ama xoqin.
2. Ka dib markaad ka saarto tattoo-ga laser-ka, fiiro gaar ah u yeelo nadaafadda iyo nadaafadda. Haddii nabarro dhacaan, waa inaan lagu mudin markay doonaan, waana in loo oggolaadaa inay keligood isdajiyaan.
3. Inta lagu jiro ka saarista tattoo-ka laser-ka, boomaatada ka hortagga ama dawada afka ayaa la marin karaa si looga hortago dhacdada labaad.
4. Ka dib markaad ka saarto tattoo-ka laser-ka, waa inaad fiiro gaar ah u leedahay ka-hortagga. Midabaynta ayaa ah geedi socod bayoolaji oo gaabis ah, badiyaa 1 ilaa 2.5 bilood. Muddadan, waa inaad fiiro gaar ah u yeelato qorraxda.
5. Kahor inta aysan qolofku dhicin, qeybta qalliinka waa inaan loo bandhigin biyo, qurxin, xoqin, iska ilaalin basbaas, sigaar cabid iyo aalkolo. Mustaqbalka dhow, cuntooyinka dhaqsaha badan leh ee midabada mugdiga ah sida kafee, Pepsi, iwm, si qolofku kaligood uga daataan, hana uga xoqin xoog.
Waqtiga dhejinta: Mar-29-2021